code Short widget Transposh call uma shaqeeyo iyo sababaa dhimasho baadi –
– Qalad Fatal: Wac si aad transposh_plugin_widget habka undefined:: transposh_widget () in on line 407
Sidee this hagaajin ayaan? goobta oo dhan aan la shaqeeyo ka dib markii update sababtoo ah baadi this 🙁
Haa, cayayaanka ah – fadlan badalo 407 line la:
iyo isku day mar kale,
Waxa kale oo laga yaabaa in qiimo in la ogaado in aad u soo diri kartaa param hadda la qeexo muuqaal u eg ka plugin gudaha $instance variable
Waad ku mahadsan tahay! Haa tani waa code Debug! Laakiinse haatan soo bandhigaya listbox iyo waxaan doonayaa in aan soo bandhigo calamada. Sida loo sameeyo qalad si calamada waxaa lagu soo bandhigaa.
Tan iyo markii aan u maleynayaa in aad u wacaya sida:
hadda waa in aad u soo wici wax u eg:
Wax walba ayaa si fiican u shaqeeyay 🙂
Hi inaan dhibaato la mid ah. Xaggee ayaan ka helaan 407 line si aan u bedeli kartaa code ee Debug kor ku xusan fadlan? Thanks
ay transposh_widget.php ee tusaha Conciliation ee plugin ah, haddii aan aad maamuli kartaa, isticmaali xiriir noo sameeyaan on this site waxaan kuu soo diri doonaa version go'an
Thanks, laakiin sida ay u cabbayso CSS?
Waxaan isticmaali transposh_widget(soo diyaariyeen(), soo diyaariyeen('horyaalka’ => 'Translation', 'widget_file’ => 'Calamada / tpw_flags.php'));
Calanka hadda jira, Si kastaba ha ahaatee, ma ku shuban tpw_flags.css.
Haa, tani waa qayb ka mid adag,
waxaa jira laba siyaabood oo loo this xamili, mid ka mid ah waa in aan ka fekeri doonaa qaar ka mid ah si ay u saxdo (clueless) oo kale ah waa in ay dar widget si galeeysid a aadan soo bandhigeen taasoo ku qasbi dheer ee CSS doono.
code Tani runtii waxay ahayd arrin adag, sababtoo ah haatan CSS waxaa lagu darayaa (iyo isku celceliyo) waayo, dhammaan widgets firfircoon, oo mana jiro hab lagu ogaan karaa hubaal kaas oo sidebars muujiyaan doonaa oo bogga, widgets si firfircoon waxaa loo tixgeliyaa.
hab kale oo ay noqon doontaa in ay ku qasbi dheer ee CSS saxda ah ee meesha dhabta ah sax oofiyo ee bogga, taas oo macnaheedu yahay ku daray ficil on wp_print_scripts oo taas samayn fasalka widget add_transposh_widget_css … Waxaan qabaa in tani waxay noqon doontaa shaqo aad u badan, sidaa darteed sida hackerish socday ma aha sida fikrad xun.
Thanks for shaqada aad qaban noo.
aad caddayn kara meesha aad ka heli KEY API aad u gashanayso plugin ah?
First, Waxaan cadayn doontaa in aad hadda ma u baahan tahay furaha iyo wax walba ka shaqeyn doonaan.
Waxaan kuu sheegi karaa in sida ugu fiican ee si aad u hesho furaha waa in la isticmaalo search engine a si ay u helaan, kaliya raadi “X turjumi Key API” halkaas oo X waa mid magiciisu wuxuu aad ugu jeceshahay,
Anigu waxba ma aan dhajinta links toos ah, maxaa yeelay,:
1. Waxay si joogto ah la beddelo URLs ay, hana dhibin inaad cusboonaysiiso qof, si aanan rabin inay ka dhumiyaan akhristayaasha mustaqbalka
2. Anigu waxba ma aan is bixisay tilmaamayay iyaga, mana waxaan u maleynayaa in loo baahan yahay in aad samayn in
3. Waxaan ahay isagoo yara caajis 😉
Dhab ahaantii wax badan oo dheeraad ah oo degdeg ah, hambalyo.
Si kastaba ha ahaatee, Wax dhibaato ah in la abuuro Khariidadda bogga ah oo ka fiirsan doonaan luqadaha oo dhan. Ma leedahay xal loogu talagalay dhibkaan?
Waxaa jira karriin diyaar u plugin Google XML Sitemaps, iyo sidoo kale – Version 4 beta ee plugin oo u baahan balastar no. Waxaad ka heli kartaa go'da on site trac our
si ka fiican in ay sugto cusub 0.81 version ? haddii aanu Ma doonayo in aan gacanta dhayida ?
Waxaan balanqaadayaa waxaa jiri doona cayayaanka cusub 0.8.1 😉 laakiin si dhab ah, waxaad ii soo qori kartaa oo waxaan kuu soo diri doonaa version ah la karkaray, ama waxaa dhayida naftaada. Sidoo kale – dadka isticmaala inta badan aan la isticmaalayo feature this, kaas oo sidoo kale lagu beddeli karo gelinaayo nuqul widget ah galeeysid a iyo halkii ay si toos ah gashan code widget, galinta galeeysid ah…
Hello, ugu horreeya oo dhan mahad aad plugin cajiib ah. Labaad, ka dib markii update ee la soo dhaafay waxaan ahay awoodin inay edit aan turjumaad. Markii aan clich button edit bogga ee bedeli turjumi hab laakiin ma ahan in aan suuqa kala kasta gujisid inuu wax ka beddelo. Ma i caawin kartaa?
Fadlan isticmaal foomka xiriirka oo annana waannu kula shaqeyn doontaa on this qamaar, laga yaabaa in khilaafka cusub plugins kale
Ezio, waxaad eegi kartaa haddii suuqa kala gujisid ah ayaa hadda soo bandhigeen dhamaadka aad page aan style?
Asalamu caleykum. Waxaan sixi cayayaanka laakiin aanan bedeli karin, dropdown dib calamada. Ha Waxaan ku dari code kor ku xusan si hoose ee widget.php ama file a kala duwan?
Waxaad u baahan tahay in la beddelo xeerka la odhan widget, waxaa lagu sharxay kor ku xusan
Hello, Waxaan kaliya ku rakiban version cusub 0.8.0, laakiin haatan wax kasta oo dheeraad ah oo ka shaqeeya… heshiis? mahadsanid!
Fadlan si toos ah nala soo xiriir, waxaana isku dayi doonaa inaan ku saxno
Thanks to helitaanka kooxda: Waxaan xallin dhibaatada canbiando JQuery iyo script in ku xiran 🙂
Debooraah khamaar sheegay
Transposh ma muujiyaan si sax ah in version 0.8.0 Ma jirtaa arin a?
Hello ay jiraan, u muuqataa sida shahwadda CSS a, nala soo xiriir si toos ah in ay ka shaqeeyaan arin a
Glenn Newland sheegay
Anigu waxaan ahay greatful shuqulka aad rido sii daayo cusub oo dhan, fiirsaneysa sida ay u adag dhibaatada API google ayaa laga yaabaa in ay macaamiloon leh marka hore. Si wanaagsan baad yeeshay!
Waxa aan ahay cajiib ah oo ku saabsan yahay sida aan hubiyo karaa goobta la qoran matoorada search caalamiga ah, in af badan? Waxaan ula jeedaa, mahad Transposh my site hadda akhrin karo in 3 luqado, laakiin waa in la mid ah sida haddii ay ahaayeen “martigelisay” oo ku qoran luqado thoe mise waxaan u baahan tahay inaad wax ka qaban (sida kayd bog kasta ama abuuro multisite a?)
Thanks for sii daayo cusub, iyo dhalato API.
Red Baaskiilka The
Waxaad leedahay dhibaato on your site oo uma oggolaan doono in matoorada search si aad u aragto meelaha aad, Malahayga waa arrin database a, laakiin waxaa loo baahan yahay imtixaanka, nala soo xiriir si toos ah shaqada on this qamaar
OK waydiiyaa, Waxaan si toos ah aad u soo xiriiro. Ka dibna waxa, Waxa kale oo aan laga saaray diido: /Interbis / * aan ka file robots.txt. Waxaa laga yaabaa in tani ay ahayd sabab u?
Not, Jidka ayaa ka maqan miisaska database, Waxaan idiin soo qoray si toos ah oo ku saabsan arrinta la sida loo xaliyo.
update Great. Ma jiraa hab lagu samaynta calanka u weyn? Way arki waxoogaa laga badiyay on asalka cad.
Waxaad heli doontaa si aad u hesho calanka weyn oo lagu badalo kuwa hadda, ama wax ka qoraan subwidget a – eeg http://trac.transposh.org/wiki/WidgetWritingGuide
plugin cusub qarxay my site ka dib markii ay ku rakibidda maanta. Waxaan jeclaan lahaa in aan aan la casriyeeyay, sababtoo ah goobta aan dhan hoos waa hadda, haddii aan awood plugin ku 🙁
Fadlan isku day dib-u-rakibidda plugin ka wordpress.org, dhalato ah dillaacin ah dadka isticmaala ee function widget la geeyay, sidoo kale waxaad si toos ah nagala soo xidhiidhi kartaa oo aanu kaa gargaari doonaa
haddii kale sheegay
edit text iyocadhadii la ver. 0.8, maxaa khaldan?
At this site http://www.wcafeasia.com ku rakibtay plugin laakiin ma edit karaa qoraalka ah oo dhan?
Hayso site kale la version ah erlier shaqeeya wanaagsan, Waxaan leeyahay goobaha isku usel la this ka mid ah (0.8), laakiin iyocadhadii edit.
Waxaan gelin muhiim ah API ka Google (for browser)
Qof kasta oo ogyahay?
Your theme waxaa loading jQuery1.3.2 a (taas oo ah qadiimiga ah), hagaaji oo ay noqon doontaa si aad u faraxsan
Thanks for reply! Ma leedahay fikrad kasta sida loo sameeyo in?
Edit files theme hadda in meesha laga saaro waxaa ka mid ah (u badan tahay in madax)
Delete file laftiisa ama u bedelo
Dib-u-rakibay .80 version per tilmaamaha, iyo goobta weli waa 100% jebiyo haddii aan awood plugin ah.
Word digniin – ma ku rakibi version this, u burburin laga yaabaa in your site sida anigaa iska sameeyey.
Waxaan tirtiray gal plugin, unzipped nuqulka cusub ee 0.80 oo weli goobta oo dhan u dhaco caloosha ilaa. qaab waxba – waxa uu noqon doonaa shaashad browser cad.
Waxaan oggolahay, marna loo soo dajiyo kasta oo la casriyeeyay, wax kasta oo laga yaabo in ay jebiyaan, laakiinse aad dhibic, eegto FAQ ah, this u badan tahay waa arrin xadka xasuusta, laakiin ma aha in aan arko sabab sababta ay tahay in loo xiran casriyayn ah.
Hadda, haddii aad rabto in arrintan lagu xalin, isku day in aad si toos ah nooga soo xiriiraya, waxaan si caadi ah isku dayaan in ay caawiyaan. Mararka qaarkood waxaan ma samayn
plugin waxaa ciyaaro kaamil badan marna ka hor!
Wax yar si ay u caddeeyaan:
1. Ma laga yaabaa in aad fadlan sharax sida loo dar boggaga turjumay si Khariidadda bogga? (Anigu ma heli marka aad ayaa sheegay in ay ku saabsan ee comments hore).
2. Ma this okay la WP Super khasnado?
1. Jawaabtu waa in FAQ iyo goobta Dev our (http://trac.transposh.org)
2. Haa, ilaa xad si
First, ha i odhan, aad leedahay plugin weyn. Anigu waxaan ahay ee USA, ka shaqeeya on site tusaha ee Morocco a. Afka default on goobta waa Faransiis. On this site, ganacsiyada in ay buugga ku dari kartaa liiska (nooca caadiga ah post) isticmaalaya luqad oo kala duwan. Tusaale ahaan haddii ganacsi ahaayeen in lagu daro liiska in English, plugin turjumi doonaa boostada (liiska) dhammaan luqadaha firfircoon, marka laga reebo luqadda default (maxaa yeelay waxa ay aaminsan yahay Faransiis?). In si kale loo dhigo, version Ingiriisi iyo tarjumaadda Faransiis dhab labadaba waa version Ingiriisi isku. Milkiilayaasha goobta rabto oo dhan of posts in ay muujiyaan in afka caadiga ah; oo laga heli karaa mid kasta oo ka mid ah luqadaha firfircoon. Ma jiraa shortcode ah in duub liiska oo dhan ee, sidaa daraadeed waxa uu soo bandhigi doonaa luqad default? (tusaale [TP turjumi ="fr"]Hello[/TP] oo waxay muujiyaan doonaa Bonjour. Or, waa halkaas qaar ka mid ah hab kale si ay this dhammayn?
Miyuu qof dhibaato la mid ah?
Waxa aanu mar dambe u turjumaan
Haddii aad weli wax dhibaato ah, hana ka baqan in aad isticmaasho foomka xiriirka on this site, oo waxaana isku dayi doonaa inaanu ku caawino
Well, Dib baan u maqli didnt wax. Si kastaba ha ahaatee, Anigu ma ogaado sida loo dhammayn lahaa waxa aan doonayay in ay awoodaan in ay sameeyaan. Si fudud u duub content ee tag QAY la fasalka ah mylang.
Sidoo kale, FWIW, qof kasta raadinaya dhex comments for macluumaad kasta oo ku saabsan in ama aan plugin taasoo markeedana keeni doonta noocyada post caadadii. Inkastoo plugin uusan aqoonsan noocyada post caadadii theme ah, aad u bedeli karaan plugin si noocyada post caadadii shaqeeyaan, si cadaalad ah si deg deg ah. Waxaad u baahan tahay edit laba files. Waxaad u baahan tahay edit on_ajax_tp_translate_all ah() function in transposh_admin.php iyo on_admin_menu ah() function, in transposh_postpublish.php.
Marka ugu horraysa waxaan this isticmaalo，Dareen waa fur-tago weyn。
laakiin，Anigu waxaan hadda dhibaato，
Ka dib markii loo xirxiro，bogagga All muuqday：
Sidee baan u xaliyo?
male My noqon doontaa dhibaatooyin la xiriira xusuusta, ama dheecaan double gzipping
Stacy & James sheegay
malaayiin mahad waydiiyaa lagu wadaago aad mashruuca.
ka turjumidda si toos ah Marka laga reebo waxa aanu aqbali domains-luqado badan haddii in ka badan 1 luqadda default waxaa loo isticmaalaa in domain ah.
Thanks sidoo kale caawimaad gaar ah dhib yar oo aan lahaa.
ugu wanaagsan oo dhan
Hello，Waxaan weli raadinaya xal u hesho dhibaatooyinka。
Waxaan jeclaan lahaa in aad weydiisato karti，Waxaa jiri doona：
“Waxaan aysan awoodin in ay hesho oo ay taageerayaan in-xasuusta caching engine ah, rakibidda mid hagaajin karaa wax qabadka. Hubi Transposh FAQs”
Waxaan sii socotay inay u illowsiin，Weli u leeyihiin in ay wax ka qaban ka hor inta ay si guul ah ugu shaqeyn karaan?
kale，Waxaan hadda u isticmaalaan goob URL go'an waa formula tirsi，tusaale：http://www.wukungfu.com/archives/123
set URL Tani waxay saamayn doontaa?
sugaynaa in si deg deg ah u isticmaali ~ Waad ku mahadsan tahay caawimada
Si aad su'aalo aad:
1. Waxaad si ammaan ah is illowsiin kartaa digniin this, waxa keliya oo u tixgeliyo waxqabadka, plugin ay ka shaqeyn doonaan oo aan this
2. Qaab dhismeedka Permalink waxaa lagu hayn doonaa.
Markaas ayaan xiran GZIP ku xallin ^^。
Currently si guul furo fur-in，
Laakiin waan arki kari waayay galeeysid ah sida aad qalab turjumaad，
Sidee ayaan u furaysto galay galeeysid ah?
Waad ku mahadsan tahay，Waxaan dareemayaa dhow halkaas! ^^
Si aad u dhigay plugin ku galeeysid ah, tag muuqaalka menu iyo jiidi widget Transposh in ay galeeysid ah, dooran style widget aad rabto iyo horyaalka iyo in ay
Waxaan arkay Backstage dhigay in la buuxiyo：
MSN muhiimka ah API
muhiimka ah API Google
Waxaan ka codsan kartaa API MSN kaas oo kooxda si ay u tagaan la API GOOGLE?
Waad ku mahadsan tahay caawimaad aad sii ^^
Waxaad iyaga ku dari kartaa haddii aad rabto, raac tilmaamaha on goobaha ay ku habboon, laakiin hadda taas looma baahna
Waad ku mahadsan tahay，ugu dambeyntii tusi kartaa。
Si kastaba ha ahaatee，Waa maxay sababta aan u dooranayo waa luqad oo kala duwan (tusaale ahaan,：English)，Page aan weli la turjumay?
Waad ku mahadsan tahay caawimada xoog ^^
Taasi waa maxaa yeelay aad theme waxaa loading aad u jir jQuery (1.3.2), sidaas darteed waxaa edit oo aan arko in ay ka shaqeyn doonaan
Waan ka xumahay!
Waxaan kaliya furaysto galeeysid jiitaa a，
Waxaan ku arki kartaa kombiyuutarrada iyaga u gaar ah si ay u，
Laakiin computer kale isticmaalaya Shique ma arkaan。
Waan ka xumahay，dhibaatooyin aad u badan -
Happy ….aad u hesho in ay ka shaqeeyaan …
Wonderful fur-in ….
shaqo Great waydiiyaa…
xishoodaan，fadlan iga caawin kara heli my page dhibaato u tahay?
Waayo, jQuery，Waxaan la beddelo wax yar ka。
In loo sahlo fur-tago hadda，laakiin Page、Qodobka aan weli la turjumaad dhamaystiran，
meelaha ka hor iyo ka dib bolded text baaba'aan ee tarjumaadaha.
halkan waxaad ka arki kartaa?
sidoo, i qabaa waxaa la isticmaalayo tag xoog halkii geesi ah
run ahaantii waxaan u malaynayaa in ay tahay in ka shaqeeyaan wanaagsan, jirin sabab uusan lahayn inuu, fadlan url halkaas oo ma aha
Waxaad arki kartaa in http://intl.relatividad.org/pt/relatividade/albert-einstein-biografia-e-obras/
iyo in dhammaan bogagga turjumay in marka hore ay “xoog” xukunkaagu yahay qaladka, laakiin
Waxaan jeclaan lahaa in ay sii wadaan si ay u isticmaalaan aad plugin weyn, laakiin tani waxay u dirayaa server on dollar.
Waxaan ku rakiban memcached iyo W3 Total khasnado (kaliya kayd database karti), laakiin natiijadu waa ay niyad jab.
Haddii Transposh firfircoon on blog ah isagoo 7.000 posts, kaliya waxaa ku filan inuu shil processor.
waa maxay Details server aad gacanta server miisaaniyadda my 3 huge websites with 20K posts each with transposh installed. Waxaa laga yaabaa in isku day wakiil dambe sida Nginx?